အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (MYCO) အကြောင်း
ဤ၀က်ဆိုဒ်သည် မည်သည့်အတွက် ထားရှိပါသလဲ? ? ? ? ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ ကုမ္ပဏီများနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအတွက် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော မှတ်ပုံတင်စနစ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO) ကို တည်ထောင် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ MyCO မှတ်ပုံတင်စနစ်မှ သတင်းအချက်အလက်များကို အီလက်ထရောနစ်ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ နေ့စဉ် ၂၄ နာရီပတ်လုံး အများပြည်သူ ၀င်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့် ၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေနှင့် အညီ MyCO မှတ်ပုံတင်စနစ်တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ MyCO မှတ်ပုံတင်စနစ်တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်သောကုမ္ပဏီနှင့် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် −
၁၉၅၀ ခုနှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရ အစုအားဖြင့်တာ၀န်ကန့်သတ်ထားသည့် အများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊
၁၉၅၀ ခုနှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရ အစုအားဖြင့်တာ၀န်ကန့်သတ်ထားသည့်အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ၊
ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန် ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့တင်ပြရန်၊ ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်များ ရှာဖွေရန်နှင့် ၀ယ်ယူရန် အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO) ကို အသုံးပြု နိုင်သည်။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံး ဘယ်မှာ ရှိလဲ ? ? ? ? ? ? ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့် အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စနစ် (MyCO) ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း အတွက် တာဝန်ခံဌာန တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် အမှတ် ၁၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးခွဲများကို ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏၀က်ဆိုဒ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသည်များ သို့မဟုတ် အကူအညီများ လိုအပ်ပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏၀က်ဆိုဒ်လမ်းညွှန်မှ တဆင့် Help menu ထိုမှတဆင့် Technical Support link ထိုမှတဆင့် Tech Support Desk တို့မှ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ နံနက် ၉:၃၀ မှ ညနေ ၄:၃၀ အထိ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။